IStremio: Isikhungo seMultimedia sanamuhla njengenye indlela yePopcorn Time | Kusuka kuLinux
Ukuqhubeka nokubuyekezwa kohlelo lokusebenza, kokubili kufayela le- inkundla yezokuzijabulisa enhlobonhlobo neye-inthanethi, kanye nalabo abafudukela ku- Ikhodi yamahhala, Sine I-Stremio.
Noma kunjalo I-Stremio, Sekuvele kuyisicelo esidala esaziwa ngabaningi, kuyajabulisa ukubona ukuthi kuguquke kanjani kwaba namuhla okwanamuhla nokusebenzayo Isikhungo Semultimedia (Isikhungo Sezindaba), enikeza isisombululo esibanzi se online multimedia ukuzijabulisa, usebenzisa amathuluzi ama-plugins kulula ukufaka. Futhi manje kusuka Ikhodi yamahhala.
Sisanda kubhala nge- Isikhathi sokusakazwa kohlelo lokusebenza lwePopcornnjengoba yethula i- inguqulo entsha ye-beta, i-4.0, kokuhle kwayo uhlelo lokusebenza lomthombo ovulekile. Mayelana nalokhu, mathupha, bengivele ngiyisebenzisile eminyakeni embalwa edlule, futhi lapho ngiyizama futhi, ibilokhu iqhubeka ukubukeka iyinhle, yize ngemuva kwezinsuku ezimbalwa zokusetshenziswa ngaphandle kwezindaba, ngeshwa imibhalo engezansi ayisebenzi kimi, yingakho ngayeka ukuyisebenzisa.
Futhi yize, I-Stremio Kufana kakhulu Isikhathi se-Popcorn ekusebenzeni kwayo, empeleni, njengamanje kubukeka kufana Ingabe okuyisikhungo esikhululekile samahhala semultimedia esivulekile futhi esivulekile, ngenxa yokusetshenziswa okuhle nokusebenzayo ama-plugins kulula ukufaka. Isizathu esenza ukuthi kufane ne- a Isikhungo seMultimedia esiqinile ini uhlelo lokusebenza lwe-multimedia elula ngokusebenzisa ukusakaza.
1 I-Stremio: I-New Alpha Version Manje Umthombo Ovulekile
1.1 Kuyini iStremio?
1.3 Shintshela kumthombo ovulekile
2 Izithombe zesikrini
I-Stremio: I-New Alpha Version Manje Umthombo Ovulekile
Ngokusho kwe- Iwebhusayithi esemthethweni, lolu hlelo lokusebenza luchazwa ngokuthi:
"IStremio yisikhungo semithombo yezindaba sanamuhla, esakhiwa njengesixazululo sokuzijabulisa kwamavidiyo. Ngayo, uzothola, ubuke futhi uhlele okuqukethwe kwamavidiyo ngama-plugins afakwa kalula. Amabhayisikobho, imibukiso ye-TV, i-TV ebukhoma noma iziteshi zewebhu, konke kutholakala ngeStremio".
I-Stremio inezici nokusebenza okulandelayo:
Ikuvumela ukuthi useshe kalula futhi uthole okuqukethwe okusha: Ngenxa yokuzulazula kwayo ngobungani ngezigaba, izinhlobo, ukuhlukaniswa, izindaba, phakathi kwabanye, noma ngokumane kuseshwe ukufana kwephethini yombhalo kubha yalo yokusesha
Isiza ukufakwa kokuphakathi kokuqukethwe kwe-multimediaNgokufinyelela okuchazwe kahle kwama-movie, uchungechunge, i-anime, nezinye izinhlobo zamavidiyo. Ngaphezu kwalokho, ilawula ukwamukelwa kwezaziso zeziqephu ezintsha nokukhishwa; nezincomo ngokuya ngemikhuba yokubuka yomsebenzisi.
Thuthukisa ukuhlelwa kokuqukethwe okuthandayoNgokusebenzisa umtapo wevidiyo (umtapo wevidiyo) ongangezwa kalula ngokuchofoza okukodwa kukho konke okuqukethwe okufinyelelekayo. Futhi iyalelwe ngosuku lokufakwa noma ukubonisa, noma nge-alfabhethi.
Qalisa irekhodi lakho konke okudliwe noma okufanele kusetshenziswe: Ngekhalenda elilula nelisebenzisekayo.
Ikuvumela ukuthi uthokozele okuqukethwe okutholwe kusuka kwimidiya ehlukahlukene noma kumakhompyutha: Ngenxa yamandla ayo e-multiplatform ezinhlotsheni ezahlukahlukene zamadivayisi nezinhlelo zokusebenza.
Ukwandisa nokubuyekeza ukufinyelela kokuqukethwe kwe-multimedia: Ngokufakwa okulula kwama-plugins asemthethweni nawomphakathi.
Shintshela kumthombo ovulekile
Ngokuya ngonjiniyela bayo, inkathi entsha ye- I-Stremio isiqalile, ngokukhishwa kwenguqulo yayo ye-alpha ngaphansi kwefomethi yomthombo ovulekile, engatholwa kuyo GitHub. Iveza isikhombimsebenzisi esakhiwe kabusha kancane, nephalethi yombala entsha futhi igxile ekwenzeni ngcono ukusetshenziswa. Futhi, kungowokuqala ukufaka isikhombimsebenzisi esibonakalayo esigcwele esenziwe ngokuphelele nge umthombo ovulekile, onikezwe ilayisensi ngaphansi kwayo GPLv2.
Ngemininingwane engaphezulu ngalokhu kwethulwa ungafinyelela okulandelayo isixhumanisi esisemthethweni.
I-Stremio unayo izifaki ze-GNU / Linux ngalezi zakhiwo ezilandelayo:
.deb: Okwehlukaniswa kwe-DEBIAN / Ubuntu nokufanayo (stremio_4.4.106-1_amd64.deb)
.rpm: Okokusabalalisa kweFedora nokufanayo (stremio-4.4.106-1.fc31.x86_64.rpm)
Futhi inayo Amakhosombe we-Arch / Manjaro (AUR) futhi umthombo wayo ucindezelwe GitHub ukuhlanganiswa kunoma iyiphi i-Distro. Ngaphezu kwalokho, abafaki be- Windows, MacOS, Android ne-iOS.
Ngamafuphi, njengoba sibona I-Stremio Kuyinto a enye indlela enhle kakhulu ongayisebenzisa ukufaka esikhundleni Isikhathi se-Popcorn y Ingabe. Ngokwami, ngiyisebenzisa ngemiphumela egculisayo kuze kube manje.
Siyethemba lokhu "okuthunyelwe okuwusizo okuncane" cishe «Stremio», yesimanje futhi esebenzayo Isikhungo Semultimedia (Isikhungo Sezindaba), enikeza isisombululo esibanzi se online multimedia ukuzijabulisa, usebenzisa amathuluzi ama-plugins kulula ukuyifaka, futhi manje uthuthele kufayela le- «Código Abierto»; ube kakhulu inzalo nokusetshenziswa, Kuwo wonke «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» kanye negalelo elikhulu ekusabalalisweni kwemvelo emangalisayo, enkulu futhi ekhulayo yezicelo ze «GNU/Linux».
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » IStremio: Isikhungo seMultimedia sanamuhla njengenye indlela yesikhathi sePopcorn
Ngisebenzise i-Kodi futhi kuhle kakhulu, ngizokubuyekeza lokhu ukubona ukuthi kusebenza kanjani. Ngiyabonga
Sanibonani Juan! Siyabonga ngokuphawula kwakho futhi ngiyethemba uyasithanda isicelo.
Mhlawumbe sengishiyile. Kepha ngicabanga ukuthi iJellyfin iyindlela enhle ongayicabangela. Ozithobayo.
Sawubona Gabriel! Siyabonga ngokuphawula kwakho nangokunikela kwakho. Ngiyethemba ukukhuluma ngeJellyfin kungekudala.